အာရုံတစ်ခြမ်းကို နောက်တစ်ခြမ်းနဲ့ ဖမ်းလိမ်ချုပ်ထား
လွတ်မြောက်လိုစိတ်တွေတင်းတောင့် လွတ်ထွက် မသွားအောင်
ကျစ်ကျစ်ပါနေ သွေးကြောတွေထဲ တဖျဉ်းဖျဉ်း အသံတွေ တဟင်းဟင်း
ခြေလက်တွေဖြတ်တောက်လည်းအညှောင့်ပြန်ထွက် နံရိုးတွေတဖျစ်ဖျစ်ပြန်စေ့သွား ဆဲလ်တွေ
ရီဂျန်နရိတ် မဖြစ်နိုင်တော့အောင် ဦးခေါင်းတည့်တည့်ကို ချိန်ပြီးပစ်ထည့်လိုက်
မီးပွိုင့်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရှော့ခ်ရသွား လှေခါးမလိုဘဲ မိုးပျံတိုက်တွေကို လူလွန်သတ္တိနဲ့
ခုန်ချ ဘေးတိုက် တည့်တည့် ကန့်လန့် ဒေါင်လိုက် ဇောက်ထိုး ၃၆၀ဒီဂရီ
အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲကာနီး တစ်စက္ကန့်အလိုမှ ဇာတ်လိုက်ဟာ သီသီကလေး
လွင့်စင်ထွက်သွား အားလုံးဆွံ့အကျန်ခဲ့မှ အရာရာ နေသားတကျ ဖွာလန်ကျဲစွာ
အင်နာဂျီပါးလွှာတဲ့ စကားလုံးပွယောင်းယောင်းတွေ တတ်နိုင်သမျှလေး ဒီတစ်ခါဖြင့်
တကယ့်ကို နောက်ဆုံး နူးညံ့တဲ့အသုံး မိခင်ဆန်ဆန် မောင်နှမဆန်ဆန် ချစ်သူဆန်ဆန်
တဒင်္ဂကလေး ဟိုမှာ ရိပ်ခနဲ လိုက်လာကြပြန်ပြီ ခေါင်းငုံ့ထား ပြန်လှည့်မကြည့်တမ်း
ပြေးပေတော့ မကြာခင် ဇာတ်သိမ်းပိုင်း အမှတ်စဉ်လေးဆယ် အတွဲတစ်ရာ့တစ်ဆယ် မှာ
စူပါအင်အားဖြည့် အင်ဂျက်ရှင်ကို သွေးကြောထဲ ဖောက်ခနဲ ဦးနှောက်ထဲ လက်ခနဲ
ဗီလိန်တွေလူကောင်းပြန်ဖြစ် ပြောင်းပြန်နိယာမနဲ့ အကူးအပြောင်းမှာ ဟက်ခနဲ
အရိုးတွေတရွှီရွှီတွန်လာကြ ဂူဂဲလ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်များမှ တဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်လို ပြန့်နှံ့စေတဲ့
ပါဝါတစ်ခုဟာ စုပ်ယူနေ သံလိုက်တုံးလိုဆွဲခေါ် အဲဒါဟာ မွတ်သိပ်မှုသက်သက်
စိတ္တဇကို စိတ်တစ်စက ပြန်ငြင်း ကြက်သီးမွေးညင်းတွေကို ခုတ်ပိုင်းချလိုက်
နောက်တစ်ခါ greater good အတွက် save the world ကျေးဇူးပြုပြီး
ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ အဲဒီပတ်စဝါ့ဒ်ကို ရိုက်ထည့်နေမိတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ ထိပ်ကို
ပင်အပ်တွေ တစ်ချောင်းချင်း တစ်ချောင်းချင်း တစ်ချောင်းချင်း … စိုက်-ထည့်-လိုက်
အဖြူရောင်မုသားများ လေထဲစိမ့်ထွက် အသက်ရှူသူတိုင်းအတွက် အန္တရာယ်အချက်ပေးသံ
ခေတ္တနားကြပါစို့ ခေတ္တရှောင်ရှားကြပါစို့ ခေတ္တထွက်ခွာကြပါစို့ ခေတ္တ ခေတ္တ
((အားးးးးး.. ဓာတ်လှေခါးထဲ ပိတ်မိနေလို့ ကယ်ကြပါဦး ဒုံး ဒုံး…))
Posted by pandora at 7:05 PM3comments
ခရစ္စမတ်ဆိုတာ သူ့အတွက် ပျော်ရွှင်စရာ ပွဲတော်တစ်ခုဟု မစဉ်းစားတော့တာ ကြာပြီ။ ခရစ္စမတ်မှ မဟုတ်၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲ၊ ပါတီပွဲတွေ၊ စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေ မည်သည့်ပွဲသဘင်မျိုးကမှ သူ့ကို ပျော်ရွှင်မှု (အနည်းဆုံး စိတ်လှုပ်ရှားမှုလောက်ပင်) မပေးစွမ်းနိုင်တော့တာ ကြာခဲ့ပြီ။ သူထိုင်နေသည့် ခုံတန်းရှည်ပေါ်ကို နှင်းတွေ ဖြိုးဖြိုးဖျောက်ဖျောက် ကျနေစဉ် အိမ်အတော်များများ ရှေ့တွင်တော့ ထင်းရှုးပင်များကို ပြောင်ပြောင်လက်လက် ရောင်စုံဖဲပြားများ ခေါင်းလောင်းများဖြင့် ဆင်ယင်နေကြသည်။ အိမ်တွေထဲမှ ကလေးများ ဆူဆူညံညံ အော်ဟစ်ရယ်မောနေသံကို ကြားရတော့ သူ ပခုံးတွန့်မိသည်။ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ တစ်ယောက်ယောက်က ပေးမည့် ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ကို မျှော်လင့်ရင်ခုန်နေကြတာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ လိုချင်ခဲ့သော အရာတွေကို စန်တာကလော့ဟု ခေါ်သော ခရစ္စမတ်ဘိုးဘိုးက လက်ဆောင်ထုပ်ထဲ ထုပ်ပိုးသယ်လာမည်ဟု သူလည်း မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးပါသည်။ အဲဒီအချိန်က သူလိုချင်သည့် အရာတွေကတော့ ရိုးစင်းခဲ့ပါသည်။ ရောင်စုံခဲတံဗူး၊ ဘောလုံး၊ ပလစ်စတစ် သေနတ် စတာတွေ။ တခါတလေကျတော့ သူ တောင့်တနေသည့် အရာတွေက လက်ဆောင်ထုပ်ထဲ ပါမလာပေမယ့်လည်း အခြား သူ နှစ်သက်နိုင်သော အရာတစ်ခု ပါလာတော့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါသေးသည်။ ဥပမာ သူတွေးမထားခဲ့သည့် ရုပ်စုံကာတွန်း စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ဖြစ် ချိုချဉ်တစ်ထုပ်ဖြစ်ဖြစ် ရလာတဲ့အခါ..။ တခါတလေတော့ ကိုယ်လိုချင်တာ မဟုတ်သည့် အရာတစ်ခု ရလာတော့လည်း ပျော်နိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။ ကိုယ်လိုချင်တာ မဟုတ်သည့် အရာကလည်း ကိုယ်မလိုချင်တဲ့အရာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ အဲဒီအရာဟာ ပိုကောင်းသည် မကောင်းဘူးကလည်း ပြောရခက်ပါသည်။ မည်သူက သတ်မှတ်သလဲ ဆိုသည်မှာ မူတည်နေတတ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ပျော်ရွှင်စရာတွေက အတော်များခဲ့ပါသည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာလည်း ပျော်စရာ။ ပွဲဈေးမှာ မုန့်တွေ ၀ယ်စားရတာလည်းပျော်စရာ။ စာမေးပွဲတွေ အောင်တာလည်း ပျော်စရာ။ အဲဒီအထဲမှာ ကဗျာရွတ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပြိုင်ရတာလည်း ပျော်စရာတစ်ခု။ စင်မြင့်ပေါ်မှာ ဒူးကလေးထောက်လို့ လက်ဟန်အမူအရာဖြင့် ပါးစပ်ကလေးဟပြီး ကဗျာရွတ်နေသည့် အပြစ်ကင်းစင်သော ကလေးလေးတစ်ယောက်၏ ပုံရိပ်ဟာ ပျော်စရာပဲ။ အဲဒီလို ပျော်စရာ ကဗျာတွေကို အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဘာဖြစ်လို့ မရွတ်နိုင်ကြတော့တာပါလိမ့်။ ငယ်ငယ်ကတော့ ဘာလိုချင်ခဲ့ ဘာလုပ်ချင်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေ၊ ရခဲ့သလား မရခဲ့သလား ဆိုတာတွေဟာ သိပ်တော့အရေးမကြီးခဲ့ဘူး ထင်ပါသည်။ မရတော့လည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ပြီး အစားထိုး တစ်ခု ရသွားတော့လည်း အလွယ်တကူ ပျော်ရွှင်တတ်သားပဲ မဟုတ်လား။ တကယ်တော့ သည်လို ပြောရတာလည်း သိပ်တော့ မတရားပါ။ ဒါက အခုအချိန်မှာ အရင်အချိန်ကို ပြန်တွေးတဲ့ အတွေးဖြစ်နေသည်။ အဲဒီတုန်းကလည်း အဲဒီအရွယ်အလျောက် အရေးကြီးကောင်း ကြီးခဲ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အသက်ကြီးလာသည့်အခါ လူတို့၏ အလိုတွေက ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးနေတတ်သည် မဟုတ်ပါလား။ လူကြီးတို့၏ မျှော်လင့်ချက်သည် ကိုယ်တိုင်တစ်ဦးတစ်ယောက် ထက်ပိုသော အခြားသူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်နေတတ်သည်။ သူ့ဆန္ဒက အခြားတစ်ယောက်ယောက်၏ ဆန္ဒနှင့် ပြောင်းပြန် အချိုးကျနေနိုင်မလား။ ဒါဟာ လွဲမှားနေသည့် ယုတ္တိဗေဒလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူတွေဟာ နောက်ဆုံးတော့ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်း မဟုတ်ဘူးလား ဘာလို့ တခြားသူတွေကို ထည့်စဉ်းစားနေရမှာလဲ ဆိုသည်မှာ ပဋိပက္ခဖြစ်စေသော စဉ်းစားမှုဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုချင်တာတွေဟာ အချိန်အခါ နေရာအလိုက် ပြောင်းပြောင်းလာတတ်သည် ဆိုလျှင်တော့ သူ့မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြောင်းလဲလာဖို့ သူက မျှော်လင့်နေသေးသည်။ အခုအချိန်မှာ ခရစ္စမတ်က သူ့အတွက် အရေးမကြီးဘူးပဲ ထားပါတော့၊ သူလိုချင်သည့် တစ်ခုခုဟာ ခရစ္စမတ်မှာ လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ် ကျိန်းသေ ရလာမည် ဆိုလျှင်တော့ နေ့တိုင်းကို သူက ခရစ္စမတ် ဖြစ်နေစေချင်ဦးမှာ။ ဒါဟာလည်း မည်သူကမှ အပြစ်မတင်သင့်သည့် သာမန်လူသားဆန်ဆန် လောဘတစ်မျိုး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု သူက ချေပနေမိသေးသည်။ ကိုယ်လိုချင်သည့် အရာတစ်ခုကို ကိုယ်ပေးစေချင်သူ တစ်ယောက်က ပေးလာမှ ရချင်တာ ဆိုတာမျိုးကတော့ မခက်ပေဘူးလား။ ဘာကိုမှ လိုချင်ရကောင်းမှန်း မသိတော့အောင် စိတ်တွေ ကုန်ခန်းနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘာထည့်ထားမှန်းမသိသည့် ကံကြမ္မာကို စွန့်စွန့်စားစား ဖွင့်ဖောက်ဖို့တော့ သူ မကြိုးစားခဲ့ပါ။ သူ ဆက်ထွက်လာတော့ ဝတ်ထားသည့် ကုတ်အင်္ကျီပေါ်မှာ တင်နေသော နှင်းဖတ်တွေက တပါတည်း ခိုတွယ်လိုက်သွားသည်။ အနီရောင် ဖဲကြိုးဖြင့် စည်းနှောင်ပြီး လှလှပပ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထုပ်ပိုးထားသည့် အစိမ်းရောင် လက်ဆောင်ထုပ်ကလေးက သူ့ကိုငေးကြည့်ရင်း ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
(Rose ရေးခိုင်းထားတဲ့ tag post ကို ရေးလိုက်ပါတယ်။)
Posted by pandora at 6:53 PM7comments
ခိုင်စိုးလင်း စီစဉ်တဲ့ “ကျောင်းအကြောင်း” (all about school) ebook ထွက်ပါပြီ။ သရုပ်ဖော်ပုံတွေကို မလေးမေက ရေးဆွဲပါတယ်။ ပါဝင်ရေးသားသူတွေကတော့ ကိုကိုသက်၊ ကျော်ညိုသွေး၊ ကြည်သက်ဟန်၊ ခိုင်စိုးလင်း၊ ချစ်ကြည်အေး၊ ညီဇံလှ၊ ညိုမင်းခ၊ နေဦး၊ ပန်ဒိုရာ၊ မိုးလှိုင်ည၊ မှိုင်း ဆေး(၂)၊ Louise Jane Cher ၊ သက်ဝေ၊ ဟန်သစ်ငြိမ်၊ ဟယ်ရီလွင် နဲ့ သြမြိုင် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်က လင့်ခ်မှာ download ယူနိုင်ပါတယ်။ (connection နှေးလွန်းလို့ ကိုယ်တိုင်တော့ download မရသေးပါ။)
ပန်ဒိုရာ ရေးသားတဲ့ “ပညာရေးစနစ်တစ်ခု၏ အစွန်းထွက်တန်ဖိုးများ၏ အရေးပါမှု၏ ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားများ၏ နောက်ဆက်တွဲ” ဆိုတဲ့ စာအသစ်တစ်ပုဒ်ရယ် “အသံမမြည်နိုင်တဲ့ ခေါင်းလောင်းကလေးတွေ” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုဟောင်းတစ်ပုဒ်ရယ်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ download လုပ်ရတာ ခက်ခဲသူတွေ ဖတ်နိုင်ဖို့ စာအသစ်ကို ဒီမှာ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
ပညာရေးစနစ်တစ်ခု၏ အစွန်းထွက်တန်ဖိုးများ၏ အရေးပါမှု၏ ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားများ၏ နောက်ဆက်တွဲ
တက္ကစီဒရိုင်ဘာက မေးငေါ့ပြရင်းပြော။ ဓာတ်ပုံတွေ ဖြန်းခနဲ ရိုက်သံ။
(အဲဒီမှာ ကျောင်းဆောင်တွေရှိတယ်- စာသင်ဖို့၊ ဘော်ဒါဆောင်တွေရှိတယ်- ကျောင်းသားနေဖို့၊ ရေကန်တစ်ကန်ရှိတယ်- အပန်းဖြေဖို့၊ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိတယ်- စာအုပ်တွေထားဖို့၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်တစ်ခုရှိတယ်- ကျင်းပဖို့)
(…ပညာရေးနှင့်ကျောင်း၊ ကျောင်းနှင့်ပညာရေး၊ ကျောင်းမပါသောပညာရေး၊ ပညာရေးမပါသောကျောင်း…)
အတွေးများ လွတ်ထွက်ပြီး ၀ရုန်းသုန်းကား ဆူညံ။
ကတ္တားလာ၊ ကံလာ၊ ကြိယာလာ။ ကြားမှာ အတွဲအဆက်ပုဒ်များ လိုသလိုထည့်။ ဆရာက နမူနာပေး။ (ဥပမာ - မောင်လှသည် ဘောလုံးကို ကန်သည်)။ ၀ါကျများဖွဲ့ရန် ကျောင်းသားများကို ညွှန်ကြား။
(မောင်မြသည် ဘောလုံးကို ကန်သည်)
(မောင်ဘသည် ဘောလုံးကို ကန်သည်)
(နီနီသည် ဘောလုံးကို ကန်သည်)
(ဖြူဖြူသည် ဘောလုံးကို ကန်သည်)
(ကိုကိုသည် ဘောလုံးကို ကန်သည်)
(မမသည် ဘောလုံးကို ကန်သည်)
ကလေးများ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဖြေသံ ဟိုနား ဒီနားက ထွက်လာ။ ဆရာက ခေါင်းညိတ်။
((၀တ်မှုန်ရွှေရည်သည် ဟန်ဘာဂါကို စားသည်))
ဆရာ့အသံသည် မာန်ဖီနေ။ တစ်ခန်းလုံး ဟိန်းသွား။ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ကြောင့်လား၊ ဟန်ဘာဂါကြောင့်လား။ စားသည်ကြောင့်လား။ ကျောင်းသားများ မည်သူမျှ ပြန်မဖြေကြ။ တိတ်ဆိတ်နေ။ စာသင်ခန်း ပြူုတင်းပေါက်အပြင်တွင် တည်ရှိသော ဗာဒံပင်တစ်ပင်မှ သစ်ရွက်နီနီတစ်ရွက် ကြွေကျ မြေခ သေဟ။
ကြေမွနေသော ခေါင်းထဲမှ ပင့်ကူတစ်ကောင်၏ နားကျပ်တစ်စုံ ဆင်မယဉ်သာ လက်လှမ်းများဖြင့် ဒီဗွီဒီဖွင့်စက်တစ်လုံး ပလုပ်ပလောင်း ခရမ်းရင့်ရောင် သစ်ခွပန်းကို ရီမုကွန်ထရိုးဖြင့် ဒစ်ရှင်နရီ ကြည့်စရာမလိုဘဲ တယ်လီဖုန်း မြည်လာစဉ် စင်ကာပူတံဆိပ် Bee Cheng Hiang ၀က်သားပြား၏ နူးညံ့ပျောင်းမွှတ်မှုဟာ သွားရေယိုစရာ စတီးလ်ချိုင့်၏ အတွင်းရော အပြင်ပါ ညောင်းညာကိုက်ခဲနေသဖြင့် အ၀ါရောင် စက္ကူအိတ် ကျိုးပေါက်သွားလျှင်သွားချင်း ဒိုင်ယာရီနောက်ကွယ်မှ ဖြစ်တည်နေထိုင်မှု၏ အဓိပ္ပါယ်တွင် သက်ရောက်နှိုင်းယှဉ်ချက်များဖြင့် ဇီဝမျိုးစိတ်တို့ ပါဝင်ခွင့်မရသောအခါ တမ်းမက်မူးရီတိမ်းညွှတ်မိသူ အဖို့မှာတကား ကလီရှေးများဖြင့် အထူးထူးအပြားပြား တင်စားရွတ်ဆိုအပ်သော လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယင်တလောင်းလောင်းအုံလျှက် ပစ္စတိုတစ်လက် ဖြောင်းခနဲအဖွင့် တစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေ ဆိုသလို ခရီးဆောင်အိတ် အနီရောင်လိုင်းကျားကြီးများထံသို့ တောအုပ်ဟာ တရွှီရွှီမြည် လိုင်းကျသွားနိုင်သည် ဆိုသော်လည်း ယနေ့အကြွေးမရောင်းသည့် တံခါးဟစိစိကို ရေအပြည့်ထည့်ထားသော ဇလားတစ်လုံး မျက်နှာသစ်ကန် အစပ်နားမှာ ပြက္ခဒိန်ရှေ့ချ စာစီစာရိုက် အချိန်တန်တော့လည်း နွားပိန်ကန်လာမှာပေါ့ကွာ။
ခန်းမထဲမှ လူအများသည် မိန့်ခွန်းကို စောင့်မျှော်လျက်။ မိန့်ခွန်း အစီအစဉ်သည် အသင့်ရေး မိန့်ခွန်းစာရွက်ကို စောင့်မျှော်လျက်။ မိန့်ခွန်းစာရွက်သည် သူ့ကိုကိုင်ဖတ်မည့် မိန့်ခွန်းခြွေသူကို စောင့်မျှော်လျက်။ မိန့်ခွန်းခြွေမည့်သူသည် မိုက်ကရိုဖုန်းကို စောင့်မျှော်လျက်။ မိုက်ကရိုဖုန်းသည် လျှပ်စစ်မီးကို စောင့်မျှော်လျက်။ လျှပ်စစ်မီးသည် စီမံကိန်းကို စောင့်မျှော်လျက်။ စီမံကိန်းသည် အသေးစိတ် ညွှန်ကြားချက်များကို စောင့်မျှော်လျက်။ အသေးစိတ် ညွှန်ကြားချက်များသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်မျှော်လျက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အစည်းအဝေးကို စောင့်မျှော်လျက်။ အစည်းအဝေးသည် ခန်းမထဲမှ လူအများကို စောင့်မျှော်လျက်။ ခန်းမထဲမှ လူအများသည်…
(ရှင့်ဟာက ရိုးလွန်းတယ် ရှင့်ဟာက သိပ်ကိုရိုးလွန်းနေတယ်)
စက္ကူအပိုင်းအစတစ်ဖဲ့ ကျကျနန ကျကွဲသွား။
Posted by pandora at 3:59 PM7comments
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားရှိခိုး ဂီတသံက ပျံ့လွင့်နေတယ်။ သရုပ်ဖော်ပြသူဟာ ပရိသတ်ထဲမှာ ထိုင်နေတယ်။ တီးလုံးသံ မှိန်လာပြီး သူဟာ အိတ်တစ်လုံးထဲက စက္ကူလေယာဉ်ပျံတွေကို လေထဲကို လွှတ်ရင်း ရှေ့ကို လျှောက်လှမ်းလာတယ်။ စက္ကူလေယာဉ်ပျံ တွေ ဆက်လွှတ်တယ်။ နောက်တော့ စက္ကူလေယာဉ် တစ်စီးကို နံရံပေါ်မှာတင်ပြီး အတောင်ပံတစ်ဘက်စီပေါ်မှာ ဆော့ပင်တစ်ချောင်းနဲ့ ရေးခြစ်လိုက်တယ်။ ရေးလိုက်တဲ့ စာလုံးကတော့ FREEDOM တဲ့။ အဲဒီ FREEDOM လို့ အတောင်ပံတွေပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စက္ကူလေယာဉ်ကို ကိုင်ပြီး အားကုန်လွှဲ လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။ လေယာဉ် ကျသွားတဲ့ အနီးအနားကလူတွေက တစ်ခါ ပြန်လွှတ်ကြတယ်။ အဲဒီလို လေယာဉ်ကို ဟိုဘက်ဒီဘက် လွှတ်နေကြတုန်းမှာပဲ သူဟာ ညာဘက် လက်ချောင်းတွေကို တိပ်တွေနဲ့ ပတ်ချည်လိုက်တယ်။ တိပ်ကြိုးနဲ့ ပတ်ထားတဲ့သူ့လက်ချောင်းတွေရဲ့ ထိပ်မှာတော့ ကဒ်ထူပြားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ လက်ညိုးထိုးနေတဲ့ပုံစံ လက်အတုတစ်ခုကို တပ်ဆင်လိုက်တယ်။ ဗြုန်းဆို သူက အသံနက်ကြီးနဲ့ ထအော်လိုက်တယ်။ “ဘာမှတ်နေလဲ၊ ငါရှာနေတာ…...” လက်ညိုးအတုကြီး ကို နေရာအနှံ့ ထိုးနေရင်း ပြောနေရင်း အဲဒီမှာ ပြကွက်ကို အဆုံးသတ်ပါတယ်။။
Posted by pandora at 6:16 PM6comments
Labels: essay, others' works, performance
Posted by pandora at 11:52 AM 10 comments
အနိမ့်နိမ့် အမြင့်မြင့် အဆင့်ဆင့်
တည်သော မှီသော ရီသော ဟီသော
ဂီတဖြင့် မွေ့လျော်သော စည်ငြင်းဖြင့် နိုးထသော
ဆူညံအံပွက်သော တိုးတိတ်ညံ့သက်သော ကျပျောက်ဆုံးရှုံးသွားသော
ရှာဖွေတွေ့ရှိသော မြဲမြံတည်ဆောက်သော ပျက်လွယ်စီးလွယ်သော
ရီဝေမှုန်ဝါးသော ထင်ရှားပြတ်သားသော မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ စီးဆင်းသော
အထက်အရပ်မှ တင်းကျပ်ဖြတ်တောက်သော ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချလိုက်သော
စေ့စပ်ဆွေးနွေးသော တော်လှန်ပုန်ကန်သော အနုနည်းဖြင့် ဆွဲဆောင်ပူးကပ်သော
ရုတ်တရက် ဂရင်းဂရင်း ထမြည်လာသော ချက်ချင်း ကောက်ကိုင်လိုက်သော
ချစ်၍ခေါ်သည် လိုက်တော်မူခဲ့ မပျောင်းနွဲ့သော ချစ်၍ခေါ်ရာ လိုက်ချင်ပါလည်း
နော်ဇာရွှေကုံး တစ်ခိုင်လုံးကို လုံးလုံးမပိုင်သေးသော သင်ပုန်းချေလိုက်သော
သင်တို့ပုန်းနေခဲ့ကြသော သမိုင်းရေကြီး လှိုင်းစီးလိမ့်ပါကြသော
ဇုနတ်ဘုရင်က စေလွှတ်လိုက်သော ဟီရာနတ်ဘုရားမ၏ ကျိန်စာသင့်သော
တောသုံးတောင်ကို ပိုင်စိုးသော ရေမြေကို တက်နင်းထားသော
ဖွဲ့နွဲ့သော ရေးသားသော သီကုံးသော စပ်ဆိုသော ခြယ်သသော
အတွင်းသည် အပဖြစ်သော အပသည် အတွင်းဖြစ်သော
အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ တိုးဝင်လာသော အေး၍ခြောက်သွေ့သော
ပူ၍စွတ်စိုသော “ငါ”သည် “ရန်” နှင့်ပြတ်သော “ရန်”သည် “မိတ်”သာဖြစ်သော
လူအများ၏ဖြစ်သော လူအများ၌ဖြစ်သော လူအများအတွက်ဖြစ်သော
ယူကားယူ၍ မပေးသော ပေးကားပေး၍ မရသော ယသော အယသော
အဖန်ဖန်အလဲလဲ တခဲနက် အဆုံးသတ်သွားခဲ့သော…။
၂၁-၈.၂၀၀၁ - ၁၃-၉.၂၀၁၁
Posted by pandora at 9:19 AM9comments
တစ်ချပ်ပြီး တစ်ချပ် အထပ်ထပ် မတ်တတ်ရပ်နေကြ
ချပ် ချပ် ချပ် ချပ် နဲ့ ပြားချပ်ချပ် အသံတွေ
အဲဒီ အသံတွေဟာ ကတိက၀တ်တွေနဲ့ သံတမန်ခင်းလိုက်
ဖြည်းဖြည်း ခြေဖျားထောက်ပြီး ကိုယ်ယောင်ဖျောက်လိုက်
အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျား ပြေးလွှားလိုက်
ဒီတံခါးကနေ လိရိကဟာ အမေရိကကို တွန်းဖွင့်ခဲ့
ဒီတံခါးနောက်မှာ မော်ဒန်နတီဟာ အိုင်ဒန်ဒတီမထင်ရှား ပုန်းအောင်းခဲ့
ဒီတံခါးထဲက ကလောင်သွားဟာ ဓားသွားကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့
ဒီတံခါးပေါ် မေတ္တာတွေ ထွင်းထုထား
ဒီတံခါးကို သစ္စာဟာ ဖောက်ထွက်သွား
မွန်းစတား လိုက်ရှာခဲ့တာ ကလေးငယ် ဘူး ရဲ့ တံခါး
သတ္တမမြောက် တစ္ဆေကြီးလမှာ ၀ိညာဉ်တွေကို ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ ငရဲတံခါး
တံခါးတစ်ချပ်ဟာ ခါးကြားမှာ ခါးထစ်ခွင်ခံထားရတယ်
ဆူးကြားမှာ ခါးခါးသီးသီး သီးနေတဲ့ တံခါးတွေရှိတယ်
အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ လွင့်စင်ပျက်ကျသွားခဲ့သော တံခါးများ
သော့ခလောက်ကြီး ဟီးလေးခိုနေသော တံခါးများ
ဆုကြေးတ၀က်နဲ့ လာဘ်ထိုးခံလိုက်ရသော တံခါးများ
အခင်းအကျင်းသစ်ကို မျက်ခြေပြတ် ကျန်ခဲ့သော တံခါးများ
မကြာမီ မျိုးရိုးဗီဇ တိမ်ကောပျောက်ကွယ်သွားတော့မည့် တံခါးများ
တံခါးရောင်စုံ ဖြူဖြူ ပြာပြာ ညိုညို ညက်ညက်
ရွေးလိုက်ပါ အနီလား အ၀ါလား နီးနီးလား ၀ါးဝါးလား
Posted by pandora at 9:36 AM7comments
Posted by pandora at 9:54 PM 10 comments
Posted by pandora at 12:06 AM 1 comments
oil on paper (icn2)
moments make myths mired
melting morals’ mistake
musical mountains’ mute
mellow mornings’ moan
molded mustangs’ mutiny
mid-summer mirages’ magnet
mysterious mentor’s make-over
motivation / meditation
maturity / modernity
mercy / misty
may mend misprinted memoirs
may Martians mitigate misuse
Yangon, 10:00 pm, 08.08.11
ဒဏ္ဍာရီတွေကို ရုန်းထွက်လို့မရအောင် ဖန်ဆင်းတယ်
အရည်ပျော်နေတဲ့ နီတိတရားတွေ မှားယွင်းကြ
နူးညံ့ညင်သာ နံနက်ခင်းတွေ ပြင်းပြငြီးညူကြ
ပုံစံသွင်းထားတဲ့ မြင်းရိုင်းတွေ ပုန်ကန်ထကြွကြ
နွေလယ်ကာလရဲ့ တံလျှပ်တွေက ဆွဲဆောင်ကြ
လျို့ဝှက်သိုသိပ် ကြီးကြပ်သူရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
ကြင်နာမှု/ နာကျင်မှု တွေက
စာစီမှားခဲ့တဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကို ပြင်ဆင်နိုင်စေ
မားစ်ဂြိုလ်သားတွေလည်း အလွဲသုံးများ နည်းပါးနိုင်စေ
ရန်ကုန်၊ ည ၁၀ နာရီ၊ ၈.၈.၂၀၁၁
(ဘာသာပြန် ပန်ဒိုရာ၊ ကိုပန်)
Posted by pandora at 11:43 PM9comments
Labels: ko pan, poem
Posted by pandora at 10:33 PM 11 comments
Posted by pandora at 11:56 PM7comments
Posted by pandora at 11:50 PM 17 comments
Posted by pandora at 11:46 PM 11 comments
Posted by pandora at 5:48 PM 12 comments
စွန်ကလေး၊ ခပ်သေးသေးပါ။ ကြွားကြွားရွားရွား အဆင်တန်ဆာတွေ တပ်ဆင်မထားသော၊ ဆေးရောင်စုံ ခြယ်သ မထားသော၊ မည်သည့် အဆောင်အယောင်မျိုးမှ မပါသော စွန်ရိုးရိုးလေး ဖြစ်ပါသည်။ စွန်ကလေးကို နာမည်တစ်ခုခု ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ ကိုကို ဆိုပါတော့။
ကိုကိုသည် လူဆိုးကလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ မိုးပေါ်ကို ရုန်းပျံဖို့ အမြဲကြိုးစားနေသော စွန်ကလေးသည် တော်လှန်ပုန်ကန်လိုစိတ် တမျိုးမျိုး ကိန်းအောင်းနေသူလေးပဲ ဖြစ်ရမည်။ ကိုကိုသည် မိဘတွေ မသိအောင် ပိုက်ဆံကို တိတ်တိတ်ယူကာ ဂစ်တာတစ်လက်ကို ၀ယ်လာသော ဆံပင်ရှည်ရှည်နှင့် လမ်းသရဲကလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုကိုသည် ဉာဏ်ကောင်းသလောက် ကျောင်းစာကို မကြိုးစားချင်သော အပေအတေကလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုကိုသည် လိုအပ်လာသောအခါ အများရှေ့ထွက်ပြီး မားမားမတ်မတ် စကားပြောရဲသူ မဟုတ်မခံ ခေါင်းဆောင်ကလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုကိုသည် မုန်တိုင်းကိုအာခံရင်း လေနှင့်အတူလွင့်ပြီး မိခင်မြေကြီးမှ ဝေးရာကို ပျံတက်ကာ ဘယ်တော့မှ အိမ်ပြန်မလာတော့သော စွန်ကလေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စွန်ကလေးနှင့် ကိုယ့်ကြားမှာ ကြိုးမျှင်လေးတစ်ချောင်း ရှိသည်။ မှန်စာတိုက်မထားသော၊ သူတပါးနှင့် စီးချင်းထိုးဖို့ မရည်ရွယ်သော၊ မည်သူ့ကိုမှ ပြတ်တောက်နာကျင်အောင် မကြိုးစားသော သာမန် စွန်ကြိုးလေးတစ်မျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ဘယ်လိုမှ မရောက်နိုင်သော ကောင်းကင်ကြီးကို စွန်ကလေးက ကိုယ်စား သွားပေးသောအခါ ကိုယ်နှင့် ကောင်းကင်ကြားမှာ ကြိုးလေးတစ်မျှင်စာသာ ခြားပါတော့သည်။ ထိုအခါ ကိုယ်က စွန်ကလေးကို ကျေးဇူးတင်ရသည်။ ငှက်ကလေးများ၊ တိမ်တိုက်များ၊ သက်တံရောင်စုံများကို ကိုယ်က စွန်ကလေးမှတဆင့် လူကြုံစကား တီးတိုးပါးလိုက်နိုင်သေးသည်။ စွန်ကလေးပေါ်မှာ ကိုယ့်ဒိုင်ယာရီ တစ်အုပ်ကိုလည်း ခပ်နှိပ်ထားလို့ ရပါသည်။
စွန်ကလေး အမြင့်ပျံနေလေလေ စွန်လွှတ်သူမှာ ပျော်ရွှင်ရလေလေ ဖြစ်သည်။ မနာလိုခြင်း ကင်းမဲ့သော၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုများမှ ကင်းဝေးသော ၀မ်းသာမှုမျိုးကို အခြား မည်သည့်နေရာမှာများ ရနိုင်ဦးမည် ထင်ပါသလဲ။ ကိုယ်နှင့် ဝေးသထက် ဝေးရာကို ရောက်သွားလျှင် ပိုကျေနပ်ရသော ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ကင်းမှုမျိုးကို အခြား မည်သည့်နေရာမှာများ တွေ့နိုင်ဦးမည် ထင်ပါသလဲ။ စွန်လွှတ်သူ လက်ထဲမှ ကြိုးမျှင်ကလေးသည် စွန်ကလေး သွားလိုရာကို ရောက်အောင် ကူညီပေးရုံသာ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလောကကြီး တစ်ခုလုံးမှာ ဘယ်တော့မှ ချည်နှောင်ဖို့ မရည်ရွယ်သော ကြိုးတစ်ချောင်းကို ပြပါဆိုလျှင် ဤကြိုးမျှင်ကလေး တစ်ချောင်းသာ ရှိပါမည်။ တကယ်လို့များ ကံကြမ္မာဆိုး တစ်ခုခုကြောင့် ကြိုးမျှင်ကလေး ပြတ်တောက်သွားခဲ့သည် ဆိုပါစို့။ အတွယ်အတာကင်းသော စွန်ကလေးသည် ဟိုးအဝေး လကမ္ဘာ ရောက်သည်အထိ စကြ၀ဠာတခွင် နှံ့သည်အထိ မရပ်မနား ပျံသန်းနေဦးမည်ဟု ကိုယ်ကတော့ ယုံကြည်နေပါသည်။
နေ၀င်မိုးချုပ်လာသောအခါ ကောင်းကင်သည် အပြာရင့်လာရာမှ နောက်ဆုံး မဲမဲမှောင်သွားပါသည်။ မီးရောင်စုံ တပ်ဆင်ထားသော စွန်ကလေးတချို့မှာ လေထဲတွင် တဖျတ်ဖျတ် လင်းလက်နေပါသည်။ ရိုးရိုးသာမန် စွန်ကလေး တစ်စင်းကိုတော့ ကောင်းကင်နက်နက်မှာ ဘာမှ မမြင်ရတော့ပါ။ စွန်ကလေး တည်ရှိနေမှုကို ည၏လှည့်စားမှုကြောင့် မမြင်ရတော့သော်လည်း စိုးစဉ်းမျှ ပူပန်စရာမလိုပါ။ လက်ထဲက ကြိုးမျှင်ကလေးက စွန်ကလေး ရှိနေသည်ကို ညွှန်ပြနေဦးမည်။ စွန်ကလေး ပျံတက်နေသည်ကို ခံစားသိရှိ နေစေဦးမည်။ ညရောက်ပြီ ဆိုလျှင်တော့ စွန်လွှတ်သူမှာ ခဏ အိပ်စက်ရဦးမှာပေါ့။ မနက်လင်းလျှင်တော့ တိမ်ပြာပြာ ကောင်းကင်မှာ ၀ဲနေမည့် စွန်ကလေးကို မြင်တွေ့ရဦးမည်။ Good night ကိုကို။
Posted by pandora at 12:19 AM9comments
ဗျူဟာကျတဲ့ တည်နေရာမှာ ချထားတယ်
ရေပန်းဖွားဖွားတွေ မနေမနား လွှင့်ထုတ်ပေးတယ်
ရောင်စုံဆလိုက်နဲ့ ပုံရိပ်ယောင်တွေ ဖန်ဆင်းပေးတာလည်း ရှိတယ်
မပြုံးမရယ် ခပ်တည်တည် အနေအထားနဲ့တောင်မှ
လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို တဖျတ်ဖျတ် မီးပွင့်သွားစေသေးတယ်
Posted by pandora at 11:46 PM 16 comments
အုတ်အုတ်ခဲခဲ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ပြေးရင်းလွှားရင်း အုပ်စုကွဲသွားကြ
အညစ်အကြေးတွေ ဖွာလန်လွင့်ကျဲ သွားလေရာမှာ အတောင်ပံ အစစအနန
အဆင်မပြေမှုကို သီချင်းလိုညည်းကြ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ဆွဲဆွဲငင်ငင်
အူကြမယ် ဆူကြမယ် မျက်ရည်မပါတော့တဲ့ အခြောက်တိုက် ကျဲပါးပါးအသံတွေနဲ့
လမ်းမတကာမှာ လှည့်လည်သွားလာ ရေကြည်ရာသို့ မြက်နုရာသို့
ညည်းတွားရင်း ရုန်းကြကန်ကြ အစာလုကြ နှုတ်သီးတွေပြတ်ကျသည်အထိ
မွဲခြောက်ခြောက်ချင်း အရောင်အသွေးပြိုင်ဆိုင်ရင်း စစ်တလင်းလို ထင်မြင်လာသည်အထိ
အသိုက်ရွှေ့ရင်း ထပ်ပြောင်းရင်း မွေးရာပါအတောင်ပံတွေပေါ် ညိုညင်စိတ်ကွက်လာသည်အထိ
ဘယ်သူမှ မလိုချင်တဲ့ ခိုတွေ ခိုတွေ…. မိဘမဲ့ ရင်ခွင်မဲ့ ခိုတွေ ခိုတွေ
အိမ်ကနှင်ချခံရတဲ့ ခိုတွေ ခိုတွေ…. အိမ်ပြန်လမ်း မေ့သွားတဲ့ ခိုတွေ ခိုတွေ
ဟိုမှာဒီမှာ ပဲစေ့ပြောင်းစေ့တွေ တလျှပ်လျှပ် ပြန့်ကြဲတိုင်း ၀ုန်းခနဲထပျံလိုက်ကြ။
၁၄. ၅.၂၀၁၁ -၂.၆.၂၀၁၁
Posted by pandora at 9:31 PM 16 comments
ပြောတော့ပြောနေတာပဲ ပြောနေရင်း ပြောနေရင်း ဟော ဗြုန်းဆို လိုင်းကျသွားတာ အစကတည်းက လွယ်တာမဟုတ်ဘူး လိုင်းပေါ်ရောက်လာဖို့ကို လိုင်းဝင်လာဖို့ကို လိုင်းမိသွားဖို့ကို လိုင်းတင်ပေးထားရတာ လိုင်းသွင်းပေးထားရတာ လိုင်းချိတ်ပေးထားရတာ ကြားလား ကြားလား ကျားလား ကြောင်လား ပြောရင်း လိုင်းကြောင်သွားပြန်ပြီ လိုင်းဟာ ပြန်တက်ဖို့လုပ်တယ် ကုတ်ကတ်တွယ်ဖက် ခြစ်ခြုပ်ပြီး တက်လာတယ် ပြန်လျှောသွားလိုက် တွယ်တက်လာလိုက် အောက်ခြေကို ဒုတ်ဒုတ်ထိဆင်းသွားလိုက် ပေါလောပေါ်လာလိုက် လိုင်းဟာ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ တစ်ယောက်ယောက် ကောက်တင်ပေးလိုက်ရင်တော့ ပိုလွယ်မယ် လိုင်းဟာ လှိုင်းတွေကြားမှာ ပေါ်လိုက်နစ်လိုက် လိုင်းနစ်ရာ ၀ါးကူထိုးပေးကြပါဦး လိုင်းက မောကြီးပန်းကြီး အသံတောင်ပြာနေပြီ ငိုသံပါကြီးနဲ့ လည်ချောင်းသံကြီးနဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေတာ အကြောတွေ တငင်ငင် ဆွဲနေတာ ပြတ်တောင်းတောင်းနဲ့ တက်လာပြန်ပြီ ဟိုမှာတွန့်လိမ်တွန့်လိမ်နဲ့ ထော့ကျိုးထော့ကျိုးနဲ့ လိုင်းမလန့်စေနဲ့ လိုင်းကို ညင်သာစွာကိုင်တွယ်ကြပါ မမြင်ရတော့လည်း ခက်သား မှန်းမှန်းပြီး လိုင်းကို လှမ်းဆယ်နေရတာ လိုင်းပူးနေသလား လိုင်းပြုတ်သွားတာလား ဟိုဖက်မှာက ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိ တမင်လွှတ်ချလိုက်တာလား လွတ်ကျသွားသလား အိပ်ပျော်သွားတာလား လန့်နိုးသွားတာလား တစ်ယောက်ယောက် နှောက်ယှက်သလား တစ်ယောက်ယောက် ကူညီသလား အက်ဆီးဒန့်လား အင်ဆီးဒန့်လား သေရေးရှင်ရေးလား အပျော်သက်သက်ပဲလား ကျူနေသလား ချူနေသလား ဟဲလို ဟဲလို အသံကြားလား ဒီစာကြောင်းကို မြင်ရလား ဒီဖောင့်နဲ့အဆင်ပြေရဲ့လား ပြောရင်းဆိုရင်း လိုင်းကျသွားပြန်ပြီ။
၁၆.၄.၂၀၁၁ - ၂.၆.၂၀၁၁
Posted by pandora at 10:25 PM 17 comments
Posted by pandora at 7:44 PM 10 comments